2018-8-2 · Zimbabwe Economic Policy Analysis and research unit (ZEPAru) 1 MINISTEr S FOrEWOrD Zimbabwe is a highly literate country and it is ranked amongst the best in Africa. The Government of Zimbabwe after independence in 1980 took a deliberate stance to invest in human capital development and this led to a huge skills base in the country.
2016-11-16 · Platinum group metals (PGM) predominantly platinum made up two thirds of Zimbabwe s mineral exports in 2008 and one third of the country s total exports (excluding gold in both cases).
2020-4-19 · Mineral fuels including oil 48.2 million (1.1 ) Cotton 41.6 million (1 ) Fruits nuts 33.8 million (0.8 ) Zimbabwe s top 10 exports accounted for 92.9 of the overall value of its global shipments. Ores slag and ash represents the fastest grower among the top 10 export categories up by 58.5 year over year since 2018.
Zimbabwe Chrome Ore Related Company. Bunday Mining chrome fines lumpy ore chrome Pondlane Marketing Pvt Limited chrome supply erdogal enterprise chrome ore TapiwaVisio Zimbabwe raw Curving stones from Serpentines- Springstones- Opal stones- Cobalt stone- Kay Investment Chrome hem and shem chrome ore erdogal enterprises chrome ore Makurira Mining chrome ore mineral ore